जाडोमा किन पर्छ चायाँ ? यी हुन् बच्ने उपाय… « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
जाडोमा किन पर्छ चायाँ ? यी हुन् बच्ने उपाय…
११ पुष २०७५, बुधबार १३:३८ मा प्रकाशित
गर्मि महिनामा भन्दा जाडो महिनामा कपालमा बढी चाया पर्ने गर्दछ । टाउकोमा छालाका कोष मर्ने र नयाँ पलाउने क्रम निरन्तर चलिरहने भएकाले चायाँ परेको हो। यस्तो वेलामा टाउकोमा सेता मसिना फुस्रा दागहरू देखिन्छन् जसलाई चाया भनिन्छ ।